ချစ်ခြင်းအတွက် တော်ဝင်အဆင့်အတန်းကို စွန့်လွှတ်လိုက်သူ ဂျပန်မင်းသမီး မာကို – H2H
သင့်ဘ၀ရဲ့ချစ်ခြင်းအတွက် သင်ဘာကို စွန့်လွှတ်မှာလဲ? သင့်အိမ်လား? သင့်မိသားစုလား? သင့်အလုပ်လား? သင်သည် ကမ္ဘာသစ်တစ်ခုမှာ နေထိုင်ဖို့ နဲ့ သင်တို့ရှေ့မှာ ဘယ်တော့မှ မရှိခဲ့ဖူးတဲ့ ဘ၀ကို တွေ့ကြုံခံစားဖို့ ဖြစ်နိုင်ပါမလား? သင့်ဆုံးဖြတ်ချက်က အခက်အခဲ အတားအဆီးတွေကို သြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်မှာလား?
ဂျပန်ဧကရာဇ်ရဲ့မြေး မင်းသမီး မာကိုကတော့ အချစ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့ပြီး သူမရဲ့ ပေးဆပ်မှုက မြင့်မားပါတယ်။ သူမသည်လွန်ခဲ့တဲ့ ငါးနှစ်လောက်က တက္ကသိုလ်မှာ တွေ့ခဲ့တဲ့သူကို လက်ထပ်ထိမ်းမြားနိုင်ဖို့အတွက် သူမရဲ့တော်ဝင်အဆင့်အတန်းကို စွန့်ခွာဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ သူမရဲ့စေ့စပ်ပွဲကို 2017 စက်တင်ဘာအစောပိုင်းမှာ ကြေငြာခဲ့ပါတယ်။ မင်္ဂလာပွဲကို 2018မှာ ကျင်းပပါလိမ့်မယ်။ ထိုနေ့ရက်ကစပြီး မာကိုသည် တော်ဝင်မိသားစုရဲ့ အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်တော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါက လက်ရှိ ဂျပန်ဥပဒေကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
တော်ဝင်မင်းသားမဟုတ်ဘဲ လက်ထပ်ထိမ်းမြားသူ မင်းသမီးသည် သူတို့ချစ်တဲ့ အမျိုးသားနှင့်အတူ လက်ထပ်ပြီးရင်တော့ မင်းသမီးလေးသည် သူ ရဲ့တော်ဝင်မျိုးနွယ်၊ မင်းသမီးအဆောင်အယောင်တွေနဲ့ ရာထူး ဂုဏ်ဒြပ် တွေ ကို စွန့်ခွာခဲ့ ရ မှာပါ။ ဒါဟာ ဂျပန်တော်ဝင်မျိုးနွယ်ရဲ့ ထုံးစံပါ။ တော်ဝင် မျိုးနွယ် မင်းသားမဟုတ်ဘဲ သာမန် အရပ်သားကို လက်ထပ်တဲ့ တော်ဝင်မင်းသမီးတွေက အားလုံးကို စွန့်လွှတ်ရပါတယ်။
#Lifestyle_Myanmar credit to TB_Nandar
ခဈြခွငျးအတှကျ တျောဝငျအဆငျ့အတနျးကို စှနျ့လှတျလိုကျသူ ဂပြနျမငျးသမီး မာကို
သငျ့ဘဝရဲ့ခဈြခွငျးအတှကျ သငျဘာကို စှနျ့လှတျမှာလဲ? သငျ့အိမျလား? သငျ့မိသားစုလား? သငျ့အလုပျလား? သငျသညျ ကမ်ဘာသဈတဈခုမှာ နထေိုငျဖို့ နဲ့ သငျတို့ရှမှေ့ာ ဘယျတော့မှ မရှိခဲ့ဖူးတဲ့ ဘဝကို တှကွေုံ့ခံစားဖို့ ဖွဈနိုငျပါမလား? သငျ့ဆုံးဖွတျခကျြက အခကျအခဲ အတားအဆီးတှကေို သွဇာလှမျးမိုးနိုငျမှာလား?
ဂပြနျဧကရာဇျရဲ့မွေး မငျးသမီး မာကိုကတော့ အခဈြကိုရှေးခယျြခဲ့ပွီး သူမရဲ့ ပေးဆပျမှုက မွငျ့မားပါတယျ။ သူမသညျလှနျခဲ့တဲ့ ငါးနှဈလောကျက တက်ကသိုလျမှာ တှခေဲ့တဲ့သူကို လကျထပျထိမျးမွားနိုငျဖို့အတှကျ သူမရဲ့တျောဝငျအဆငျ့အတနျးကို စှနျ့ခှာဖို့ ဆုံးဖွတျခဲ့ပါတယျ။ သူမရဲ့စစေ့ပျပှဲကို 2017 စကျတငျဘာအစောပိုငျးမှာ ကွငွောခဲ့ပါတယျ။ မင်ျဂလာပှဲကို 2018မှာ ကငျြးပပါလိမျ့မယျ။ ထိုနရေ့ကျကစပွီး မာကိုသညျ တျောဝငျမိသားစုရဲ့ အဖှဲ့ဝငျတဈယောကျဖွဈတော့မှာ မဟုတျပါဘူး။ ဒါက လကျရှိ ဂပြနျဥပဒကွေောငျ့ ဖွဈပါတယျ။
တျောဝငျမငျးသားမဟုတျဘဲ လကျထပျထိမျးမွားသူ မငျးသမီးသညျ သူတို့ခဈြတဲ့ အမြိုးသားနှငျ့အတူ လကျထပျပွီးရငျတော့ မငျးသမီးလေးသညျ သူ ရဲ့တျောဝငျမြိုးနှယျ၊ မငျးသမီးအဆောငျအယောငျတှနေဲ့ ရာထူး ဂုဏျဒွပျ တှေ ကို စှနျ့ခှာခဲ့ ရ မှာပါ။ ဒါဟာ ဂပြနျတျောဝငျမြိုးနှယျရဲ့ ထုံးစံပါ။ တျောဝငျ မြိုးနှယျ မငျးသားမဟုတျဘဲ သာမနျ အရပျသားကို လကျထပျတဲ့ တျောဝငျမငျးသမီးတှကေ အားလုံးကို စှနျ့လှတျရပါတယျ။